Noma yimuphi cwaningo lapho ebona izinto zobujamo ukuze kucaciswe futhi ukuhlola nobungane obunenjongo kanye nokusebenzisana phakathi izinkomba lezi izakhiwo.
Lunye kuhlanganisa izinto zingafani izakhiwo zabo futhi ngendlela ethile ngandlela-thile ezihlobene. Imisebentiluhlolo isinqumo izinhlelo siqala ngokutadisha kwendawo ndaba.
Lunye - lokhu ingxenye emhlabeni wangempela, okuyinto okungenamingcele iqukethe kokubili idatha abalulekile futhi non-abalulekile. Umcwaningi kufanele bakwazi ukwaba ingxenye eningi. Ngokwesibonelo, ukuxazulula inkinga yemali ebolekwayo, kuzoxoxwa lonke ulwazi olufanele mayelana nokuphila kwabantu kwangasese iklayenti (ukuthi kukhona umsebenzi womshado, izingane ezincane uma ikhasimende kuletha, imfundo iklayenti, njll). Futhi ukuze baxazulule neminye imisebenzi ehlobene imisebenzi yasebhange, idatha efana kuyoba ngempela eningi. Idatha ukubaluleka kuncike ukuthi sikhetha njengoba endaweni isihloko.
Phakathi nesifundo, kuzomele udale i-imodeli domain. Ulwazi emithonjeni ehlukene kumele ngokusemthethweni. Lunye is semthethweni nganoma yisiphi izindlela. Izimali zingase zishintshe kakhulu. Lokhu kungaba incazelo yombhalo lesizinda noma ezikhethekile notation sokuqhafaza. Nge imodeli lesizinda uchaza izinqubo ezenzeka kuwo, kanye idatha endaweni yocwaningo kufundvwe.
Isitatimende yenkinga futhi incazelo ukuziphatha static futhi ashukumisayo lezinto ukuthi sesenze uphenyo. Incazelo ukuziphatha static kuhilela izici lezinto futhi nezici zabo. Lapho echaza ukuziphatha ashukumisayo libhekene izimbangela ukuziphatha izinto.
Ukuziphatha ashukumisayo lezinto ngokuvamile kuchazwa kanye ukuziphatha static.
Ngezinye izikhathi domain kanye umsebenzi ukuhlaziywa ehlangana ngesinyathelo esisodwa.
Isinyathelo yokunquma nekuhlatiya nezidingo idatha kwenziwa idatha ukumodeliswa adingekayo Idatha Imayini. Ngenxa yalesi cwaningo izinkinga abasebenzisi Distribution; kohlaziyo izici uhlelo; ukufinyelela idatha nezindaba kunesidingo sokuba ukuhlaziywa.
Lunye ihlaziya kulula futhi ezisebenzayo lapho inhlangano has izimpahla idatha. Nokho, akubona bonke izinkampani babe izimpahla idatha ezinjalo. Kulokhu, umthombo idatha yoqobo yolwazi tekusebenta, inkomba yomlando izinto, okuwukuthi, idatha kusuka (Izinhlelo zolwazi) ekhona IS.
Olunye ulwazi kungase kudingeke kusukela EC izinhloko imithombo zangaphakathi nezangaphandle, imibhalo ehlukene iphepha, kanye nolwazi lobuchwepheshe kanye / noma imiphumela poll.
Kufanele uqaphele ukuthi inqubo ukulungiselela idatha Onjiniyela software kufanele uchaze kakhulu ngendlela izinto kungenzeka ukuthi ukucutshungulwa. Kungase kube enye idatha esephepheni. Ngokwesibonelo, esinye sezici we iklayenti - ezingeni engenayo, okuyinto kungase kuchazwe ngokuthi: liphansi kakhulu, phansi, maphakathi, high, eliphezulu kakhulu. Kulokhu, kubalulekile ukucacisa ukushiyana kwezidalwa amazinga okuphila.
Ekunqumeni isilinganiso esifanele idatha kufanele inake ukuhleleka idatha.
Esimweni ukuthi ahlelwa, kubalulekile ukwazi ukuthi kufakwe iqoqo zonyaka / idatha ingxenye cyclical. Lapho kungukuthi ngaphambilini, okungukuthi, iqoqo izenzakalo kusukela database ayixhumene nama umugqa wesikhathi ke ngokuhamba iqoqo kumele kuhambisane nemithetho elandelayo:
1) Inani elincane amarekhodi database kungaba imbangela ukudalwa imodeli okungaphelele;
2) ukunemba imodeli kungenziwa ngcono ngoku kwandziswa kwelinani letikhungo idatha;
3) idatha ubudala ayifakiwe isethi;
4) algorithm ezisetshenziswa ukwenza umfuziselo yolwazi esikhulu kakhulu, kufanele ukwazi ukusondeza.
Test wamandla yobunzima ka iphayiphi
I amakhemikhali ukwakheka kwamaseli
Fitness Center: indlela ukuvula kusuka ekuqaleni? Kuphi ukuqala?
Uyini ekunakekeleni Cyclamen ekhaya